အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းသည်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (2018) - Your Brain On Porn
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လိင်စွဲလမ်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် (2018) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2018 သြဂုတ် 29: 1-6 ။ Doi: 10.1556 / 2006.7.2018.66 ။
Zlot Y ကို1, စတိန်းက M1, Cohen ကိုငွေကျပ်1, Weinstein တစ်ဦးက1.
ချိန်းတွေ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးတိုးပွားလာအသုံးပြုမှုရှိပါသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုအင်တာနက်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ကိုအသုံးပြုဖို့သူတို့တွင်လိင်စွဲလမ်း၏ ratings ငှါရှာကြံလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အာရုံခံစားမှုများ၏အလှူငွေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
279 ပါဝင်သူ (128 အထီးနှင့်အ 151 အမျိုးသမီး) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းခြုံငုံဆိုလိုအသက်အရွယ် 25 နှစ်ပေါင်း (SD က = 2.75) နှင့် 18-38 ၏အသက်အပိုင်းအခြားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအင်တာနက်ပေါ်ရှိမေးခွန်းဖြေသည်။ မေးခွန်းလူဦးရေဆိုင်ရာအသေးစိတ် Leibowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး, Scale ကိုရှာ Zuckerman Sensation နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း (SAST) ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲပါဝင်သည်။
အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ applications များ၏အသုံးပြုသူများသည် Non-အသုံးပြုသူများသည်ထက် SAST အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များပြသခဲ့တယ်။ ဒုတိယအချက်မှာလိင်စွဲလမ်း၏အနိမ့်ရမှတ်သူသင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုထက်နိမ့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များနှင့်အတူသင်တန်းသားများအကြားအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်မရှိခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုမဟုတ်ဘဲအာရုံရှာသို့မဟုတ်ကျားမထက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရယူဘို့အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ applications များ၏အသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်စေမယ့်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
KEYWORDS: ချိန်းတွေ့ applications များ, အာရုံခံစားမှုရှာကြံ; လိင်စွဲ; လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်
လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ (သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်များ၏လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်များအတွက် compulsive လိုအပ်ကြောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Carnes, 2001) ။ အများအပြားကရောဂါရှာဖွေစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြပေမယ့်သိပ္ပံနည်းကျအတည်ပြုကြပြီမဟုတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုမရှိခြင်း၏ဗားရှင်းအနေဖြင့်ရောဂါရဲ့ပြည့်စုံမရှိခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM) ။ (hypersexual အပြုအမူအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးဒီအမူအကျင့်စွဲကြောင့်ခွဲခြားအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးစီးပွားမှဦးဆောင်ခဲ့ပြီးKarila et al ။ , 2014) ။ လိင်စွဲလမ်း (အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း, ကျယ်ပြန့်အနုတ်လက္ခဏာကျန်းမာရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့ကျဘာများအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးဆက်များအပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးလွှမ်းခြုံKarila et al ။ , 2014) ။ သုတေသနနှင့်လက်တွေ့လက်တွေ့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကြီးထွားလာစိတ်ဝင်စားမှုရှိပေမယ့်, က DSM (DSM-5 ၏ပဉ္စမထုတ်ဝေနေဖြင့်တစ်ဦးစိတ်ရောဂါရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမထားဘူး, American Psychiatric Association, 2013) ။ အဲဒီမှာအနည်းငယ် epidemiological လေ့လာမှုများနှင့်အတော်ကြာအဆိုပြုချက်အဖြေရှာတဲ့စံဘို့ဖြစ်ကြပြီးဒီဖြစ်စဉ်များ၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းရန်ထို့ကြောင့်ခက်ခဲသည်။ အများဆုံးလေ့လာမှုများအတွက်ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယေဘုယျလူဦးရေ (ထဲမှာ 3% နှင့် 16.8% အကြားခန့်မှန်းသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများ၏ခန့်မှန်းပျံ့နှံ့ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများအတွက် 3% နှင့် 6% အကြားကွဲပြားခြားနားသည်Karila et al ။ , 2014) ။ ဆွီဒင်၏အထွေထွေပြည်သူ့ထံမှ 2,450 တစ်ဦးချင်းစီအားစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသားများနှင့် 12% ၏ 6.8% (hypersexual အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်Långström & Hanson, 2006), USA တွင်သော်လည်း, လိင်စွဲလမ်း၏ပျံ့နှံ့မှု (3% -6% အဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်Carnes, 1992).
ယူအက်စ်အေကျော်, အမေရိကန်များ၏ 45% ဆဲလ်ဖုန်းပေါ်မှာ application များအသုံးပြုသူတို့ထဲက 7% (ရည်ရွယ်ချက်ချိန်းတွေ့ဘို့ထိုသူတို့သုံးပါSmith & Duggan, 2013) ။ အဆိုပါစာရေးဆရာသူတို့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုကောက်ယူသောအခါ, iPhone ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အနာဂတျတှငျနေဆဲ2နှစ်ပေါင်းခဲ့ကြောင်းသတ်မှတ်ထားသော။ ယနေ့တွင်ပိုပြီးအားလုံးအမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူထက်ဝက်ထက်စမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ချိန်းတွေ့စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာကောက်ယူနေပါတယ်။ အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ applications များဟာသူတို့ရဲ့လယ်ပိုင်း 20 ရဲ့ (သည်အထိသူတို့၏ 30 ရဲ့လူတို့တွင်လူကြိုက်များSmith & Duggan, 2013) ။ မကြာသေးမီကအမည်ရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရတဲ့များအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတိုးပွားလာအသုံးပြုမှုရှိ၏။ ကျနော်တို့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒုတိယအချက်မှာမူးယစ်ဆေး-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီမှအလားတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအာရုံရှာဘို့ဤမျှလောက်လုပ်နေတာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလိုက်ရှာအတွက်ဖြစ်ကြောင်းသို့ရာတွင်နှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား (ရှိFong သည်, 2006; Perry, Accordino, & Hewes, 2007) ။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုအွန်လိုင်း-ချိန်းတွေ့ applications များကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြားရှာကြံအာရုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် (အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သိုးထိန်း & Edelmann, 2005; Weinstein, Dorani, et al ။ , 2015) ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်အွန်လိုင်း-ချိန်းတွေ့ applications များကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကိုအထောက်အကူပြုရန်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ လိင်စွဲကြသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု (များအတွက်ကြီးထွားလာအထောက်အထားအမြင်တွင်Weinstein, Zolek, Babkin, Cohen, & Lejoyeux, 2015), ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤလူဦးရေကြားတွင်လိင်ကွဲပြားမှုဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအာရုံရှာ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူအင်တာနက်ပေါ်ရှိချိန်းတွေ့ applications များကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရမှတ်၏ကှဲလှဲအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့တွေးဆခဲ့သည်။
284 ပါဝင်သူတစ်ဦးစုစုပေါင်းလေ့လာမှုမှစုဆောင်းခဲ့ကြပေမယ့်ငါးသင်တန်းသားများပါဝင်စံဖြည့်ဆည်းမဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦး methylphenidate နဲ့ကုသခဲ့အာရုံကို-လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) ၏သမိုင်း, အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း, အ CNS ထိခိုက်စေသည်ဟုဆေးယူပြီး, အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း, အ CNS (ခ်ျအိုင်ဗွီ, ဆစ်ဖလစ်နှင့်ရေယုန်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ရောဂါကူးစက်မှုအပါအဝင်စိတ်ရောဂါမမှန်ဘို့ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည် 18 နှစ်အောက်), ကိုယ်ဝန်, ဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်။ Inclusion စံမှန်မှန်အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူ 18-45 ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း၏အသက်အရွယ်ရှိကြ၏။ နောက်ဆုံးနမူနာ 279 ယောက်ျား (128%) နှင့် 45.9 အမျိုးသမီးတွေ (151%) ကြ၏ရာ 54.1 သင်တန်းသားများ, ပါဝင်သည်။ ယေဘုယျအားအသက်အရွယ် 25 နှစ်ပေါင်း (ခဲ့တာကိုဆိုလိုတာSD = 2.75) နှင့်အသက်အပိုင်းအခြား 19-38 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားများ၏ပျမ်းမျှအသက်သည် ၂၅.၇၅ နှစ်ဖြစ်သည်။SD = 2.83) နှင့်အမျိုးသမီးများက 24.5 နှစ်ပေါင်း (SD = 2.55) ။ သင်တန်းသား (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းသည်ချိန်းတွေ့ခြင်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများကိုအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းသည်မသုံးခဲ့ကြပါ။ အမျိုးသားများအနက် ၅၀.၈% သည်ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာတင်ထားပြီး ၄၉.၂% ကမူမသုံးကြပါ။ အမျိုးသမီးများအနက် ၆၈.၂% သည်ချိန်းတွေ့ခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာတင်ထားပြီး ၃၁.၈% သည်၎င်းတို့ကိုမသုံးပါ။ ပါဝင်သူအများစုကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဟာလိင်ကွဲလိင်ခြားသူ (၈၉.၂%)၊ ၄.၇% ဟာလိင်တူချစ်သူများဖြစ်ကြပြီး ၅.၇% ကရိုးရိုးလိင်ကွဲများဖြစ်သည်။ လက်ရှိနမူနာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာပညာရေးသို့မဟုတ်ညီမျှသောပညာရေးနောက်ခံ (၇၀.၂%) ရှိပြီးကျန်နမူနာတွင်အနည်းဆုံး ၁၂ နှစ်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပါဝင်သူအနည်းစုသည်အလုပ်လက်မဲ့ (၃၀.၁%)၊ အများစုမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်များ (၄၈.၇%) တွင်လည်းကောင်း၊ အချိန်ပြည့်အလုပ်များ (၂၁.၁%) တွင်လည်းကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။
(1) လူဦးရေအချိုးအစားမေးခွန်းလွှာလိင်, အသက်, လိင်, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လူနေမှု, ဘာသာရေး, ပညာရေး, အလုပ်အကိုင်နှင့်ချိန်းတွေ့ application ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အမျိုးအစားပေါ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
(2) Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး (Liebowitz, 1987) လူမှုရေးအခြေအနေများအားကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းတို့ကိုတိုင်းတာသည့်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသောမေးခွန်းပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပစ္စည်းများ ၂၄ ခုပါ ၀ င်ပြီး ၁၃ ခုတွင်လူမှုရေးအခြေအနေများ (ဥပမာ၊လူတွေကိုကြည့်သငျသညျရှေ့တျော၌အလွန်ကောင်းစွာမသိရပါဘူး") နှင့် 11 စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု (ဥပမာ," ဖော်ပြရန်)အများပြည်သူရေချိုးခန်းအတွင်းဆီး") ။ တစ်ဦးချင်းစီကို item များအတွက်, ဘာသာရပ်နှစ်ခုအကြေးခွံထဲမှာဖြည့်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်: 1 ထံမှစိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် (က) စကေး (အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး) (4 မှအများကြီး) နှင့် (ခ) အခွအေနကေိုရှောင်ရှားခြင်း၏ ratings (1 ထံမှအရွယ်ရှိဘယ်တော့မှ) (4 မှခဏခဏ) ။ အဆိုပါမေးခွန်းလွှာ (Heimberg ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်1999) .951 ၏ Cronbach ရဲ့αယုံကြည်စိတ်ချရဖေါ်ပြခြင်း။ ဤလေ့လာမှု၌, Cronbach ရဲ့α .96 ဖြစ်ခဲ့သည်။
(3) ; စကေး (ပြောလေရှာ Sensation Zuckerman, Kolin, စျေး, & Zoob, 1964) သင်တန်းသားများကိုနှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများအကြားကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ့နရော 40 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ Disinhibition, ပျင်းတာဟာဖြစ်ပေါ်နိုင်, စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စွန့်စားမှုရှာနှင့်အတွေ့အကြုံရှာ: အပါအဝင်လေးယောက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါမေးခွန်းလွှာ (Arnett ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်1994) .83-.86 ၏ Cronbach ရဲ့αယုံကြည်စိတ်ချရဖေါ်ပြခြင်း။ ဤလေ့လာမှု၌, .80 ၏ Cronbach ရဲ့αရှိ၏။ တစ်ဦးချင်းစီ subscale များအတွက် Cronbach ရဲ့αယုံကြည်စိတ်ချရပျင်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုရှာဘို့α = .35, အတွေ့အကြုံရှာနှင့် disinhibition ဘို့ဘို့α = .80 များအတွက်α = .57 များအတွက် .66 = αဖြစ်ခဲ့သည်။
(4) စမ်းသပ်ခြင်း (SAST ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ; Carnes, 1991) တွင်မေးခွန်း ၂၅ ခုပါ ၀ င်ပြီးမေးခွန်းမပါ ၀ င်ပါ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအမျိုးအစား (၄) မျိုးရှိသည်။သင်သည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းခံစားရပါသလော"), ဆက်ဆံရေးနှောင့်အယှက် (ဥပမာ, "သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအစဉ်အဆက်သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်ပြဿနာများဖန်တီးနေခဲ့ဖူး? "), အဆက်မပြတ် (ဥပမာ, "သင်မကြာခဏသင်ကိုယ်တိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်သာအာရုံစိုရှာတွေ့သလား?ထိန်းချုပ်ရေး၏ "), ဆုံးရှုံးမှု (ဥပမာ, "သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို လုပ်. မအောင်မြင်ခဲ့ဖူးပါသလော") နှင့် Associated အင်္ဂါရပ်များ (အလွဲသုံးစားမှုသမိုင်း, မိဘလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု) ။ အဆိုပါမေးခွန်းလွှာ Hook, Hook, Davis က, Worthington နှင့် Penberthy (နေဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်2010) .85-.95 ၏ Cronbach ရဲ့αယုံကြည်စိတ်ချရဖေါ်ပြခြင်း။ ဤလေ့လာမှု၌, .80 ၏ Cronbach ရဲ့αရှိ၏။ အဆိုပါ SAST မဆိုအမျိုးအစား data တွေကိုတင်ပြအတည်ပြုခြင်းမရှိပါနှင့်ကစဉ်ဆက်မပြတ် variable ကိုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲလိင်စွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏အမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမေးခွန်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်အဘို့အပျနှံခဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ဖိုရမ်များတွင်အွန်လိုင်းကြော်ငြာခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိမေးခွန်းဖြေသည်။ သူတို့ကလေ့လာမှုလိင်စွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်မေးခွန်းသုတေသနရည်ရွယ်ချက်အမည်မသိတည်နေကြလိမ့်မည်ကြောင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြတင်းပေါက် v.21 (IBM ကကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ) အတွက်လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်အာမုတ်အဘို့အစာရင်းအင်းပက်ကေ့အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ပုံမှန်၏ Kolmogorov-Smirnov စမ်းသပ်မှု၏မတိုင်မီကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အာရုံခံစားမှုရှာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရမှတ်များအဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ အာရုံခံစားမှုရှာကြံနှင့်လိင်စွဲရမှတ်များဖြန့်ဝေပုံမှန်မဟုတ်ကြကတည်းကအဲဒီ variable တွေကိုအမြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ လိင်, အသက်, လိင်, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လူနေမှု, ဘာသာရေး, ပညာရေး, အလုပ်အကိုင်နှင့်ချိန်းတွေ့ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းဒေတာကိုတစ်ဦး Pearson ရဲ့χသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်2 စမ်းသပ်။
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်စွဲအကြားဆက်ဆံရေးထိုကဲ့သို့သောအဘယ်သူမျှမလိင်စွဲလမ်း, အသေးစားလိင်စွဲလမ်း, အလတ်စားလိင်စွဲလမ်းနှင့်အဓိကလိင်စွဲလမ်းအဖြစ်ရမှတ်များ, လေးခုအမျိုးအစားခွဲခြားခဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရမှတ်များနှင့်အတူကှဲလှဲတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Post-hoc နှိုင်းယှဉ်အပြီးတွင် t-tests သင်တန်းသားများအပေါငျးတို့သအုပ်စုများအကြားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ရမှတ်များနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု Ariel တက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (IRB ဟယ်လ်စင်ကီကော်မတီ) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အားလုံးပါဝင်သူတစ်ဦးအသိပေးသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
လူမှုစိုးရိမ်စိတ်ရမှတ်များ, အလတ်စားပျှမ်းမျှခြင်းနှင့်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးဖြင့်ပြီးကြ၏ (= 1.84 ဆိုလို SD = 0.5), ဒါပေမယ့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံအပေါ်ရမှတ်များ (ဆိုလို = 55.52, SD = 6.14) နှင့်လိင်စွဲ (ယုတ် = 4.59, SD = 3.72) မေးခွန်းလွှာအချိုးမညီခဲ့ကြသည်သူတို့ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူး enable လုပ်ဖို့အမြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြသည်။
ကျားမအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှု [ရှိခဲ့သည်t(1, 282) = 0.75, p = NS] ပညာရေးအဆင့်ဆင့်t(1, 277) = 0.68, p = NS] အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ [t(2, 279) = 1.28, p = NS] လူနေမှုပုံစံ [t(1, 280) = 0.19, p = NS] ဒါမှမဟုတ်အသက် (r = -.10, p = NS) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရမှတ်အပေါ်။ ထို့အပြင်ပိုးမွှားတားဆီးမှု SSS ၏ subscales များအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုမရှိပါ (M = 14.4, SD = 2.4, r = .07, p = NS) စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်စားမှုရှာကြံ (M = 15.5, SD = 2.95, r = -.10, p = NS) နှင့်အတွေ့အကြုံရှာ (M = 15.18, SD = 2.11, r = .04, p = NS) SAST ရမှတ်များနှင့်အတူ။ သို့သော်ပျင်းလွယ်လွယ်ခြင်းစပ်ကြားအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (M = 13.16, SD = 1.71) စုစုပေါင်း SAST ရမှတ် (r = .10, p <.05) ။
အဆိုပါလိင်စွဲလမ်းမေးခွန်းလွှာအပေါ်ရမှတ် 28 ပါဝင်သူ (10%) မျှလိင်စွဲလမ်းပြညွှန်ပြ, 101 ပါဝင်သူ (36.2%) လိင်စွဲလမ်း၏အသေးစားအဆင့်ကိုပြသ 52, 18.6 ပါဝင်သူ (98%) လိင်စွဲလမ်း၏အလယ်အလတ်အဆင့်ကိုပြပြီး, 35.1 ပါဝင်သူ ( %) (Carnes နေဖြင့်သတ်မှတ်စံနှုန်းများကိုအောက်ပါလိင်စွဲလမ်းတဲ့အဆင့်မြင့်ပြသ1991) ။ လိင်စွဲလမ်းမျက်နှာစာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, 24 သင်တန်းသားများအတွက်အဆက်မပြတ်ပြသ,9သင်တန်းသားများကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုနှောင့်အယှက်များဆုံးရှုံးမှုပြပြီး, 50 သင်တန်းသားများကိုနှောင့်အယှက်ကိုထိခိုက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့အတိတ်ကာလကမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ နှုန်း (17.9%) အများကြီးနိမ့်ခဲ့သည်ကူထီးကြားတွင်သော်လည်းအမျိုးသမီးများထဲတွင် 0.8%, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
ချိန်းတွေ့ applications များအသုံးပြုခဲ့သောသူတို့အားအကြားလိင်စွဲရမှတ်၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (ဆိုလို = 5.15, SD = 3.49) နှင့်မသုံးခဲ့သူ (ဆိုလို = 4.21, SD = 3.83) လိင်စွဲရမှတ်များအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်အကြားသိသိသာသာပြသခဲ့သည် [t(1, 277) = 2.086, p <.05] ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်လိင်စွဲလမ်းမှုနိမ့်ကျသောပါ ၀ င်သူများသည်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမြင့်မားသောပါဝင်သူများထက်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုရမှတ်များနိမ့်ကျသည်။t(1, 228) = -3.44, p <.01] ။ ဇယား 1 လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အာရုံခံစားမှု၏ရမှတ်များလိင်စွဲစပ်လျဉ်းရှာကြံပြသထားတယ်။
စားပွဲတင် 1 ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရမှတ်များ [ယုတ် (SD)] နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံ [ယုတ် (SD)] လိင်စွဲစပ်လျဉ်း
(အမြင့်n = ၂၀101)
အလယ်အလတ် (n = ၂၀52)
မိုင်းနား (n = ၂၀101)
အဘယ်သူမျှမ (n = ၂၀28)
လိင်စွဲလမ်းအဆင့်ဆင့် 1.73 (0.47) 1.72 (0.41) 1.84 (0.49) 1.98 (0.55) 5.28 .001
Sensation ရှာကြံ 56.85 (6.79) 57.89 (5.85) 59.73 (6.64) 58.35 (6.03) 1.59 .190
မှတ်စု။ SD က: စံသွေဖည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ရည်ရွယ်ချက်ချိန်းတွေ့ applications များအသုံးပြုသောသူတို့တွင်လိင်စွဲလမ်း၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖော်ပြသည်။ အာရုံခံစားမှုရှာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ ratings အကြားမျှအပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ (ကျဘာနှင့်ညစ်ညမ်းပေါ်မှာငါတို့ယခင်လေ့လာမှုနှင့်မတူဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာကြားတွင်လိင်စွဲလမ်းအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုမတှေ့Weinstein, Zolek, et al ။ , 2015).
ယခင်လေ့လာမှုများ (စိတ်ဓါတ်များမမှန်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါအဝင်လိင်စွဲလမ်း၏အခြားစိတ်ရောဂါ comorbidities, ပြသGarcia & Thibaut, 2010; Mick & Hollander, 2006; Semaille, 2009), လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, dysthymia, ADHD (Bancroft, 2008), (dysregulation ထိခိုက်စေWeiss & Samenow, 2010) နှင့် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (Carnes, 1991) ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း, (ရန်ဘုံများမှာLorains, Cowlishaw, & Thomas, 2011), compulsive ဝယ် (Mueller et al ။ , 2010; Weinstein, Mezig, Mizrachi, & Lejoyeux, 2015), အင်တာနက်စွဲ (Kaess et al ။ , 2014; Ko et al ။ , 2014; Weinstein, Dorani, et al ။ , 2015), နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲ (Weinstein, Maayan, & Weinstein, 2015) ။ ဒါဟာအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်ကြောင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ maladaptive လမ်းပေါ်ပေါက်နေကြသည်ရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားအထီးအကြားစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အနာဂတ်အင်တာနက်စွဲအကြားတစ်ဦးကကြားဆက်ဆံရေး (ထူထောင်ထားပြီးCho, Sung, Shin, Lim, & Shin, 2013) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်စွဲလေးလည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခု exacerbation အစီရင်ခံထားသည် (Ko et al ။ , 2014) ။ ဆန့်ကျင်, စိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်တွင်လွှတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လျော့နည်းသွားသည်။ ကျနော်တို့ဘာများနှင့်ညစ်ညမ်း (ပေါ်မှာငါတို့ယခင်လေ့လာမှုနှင့်မတူဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာကြားတွင်လိင်စွဲလမ်းအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုမတှေ့Weinstein, Zolek, et al ။ , 2015) ။ ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်ရှိချိန်းတွေ့လူဦးရေအနက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားပိုပြီးတန်းတူညီမျှမှုရှိကွောငျးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ဒါဟာယောက်ျားကပိုမှနျကွောငျးဝနျခံသောနှင့်လိင် compulsive နေသောလိင်အသွင်မြင်လာအောင်, ပိုပြီးညီမျှနှင့်လစ်ဘရယ်ကြောင်းထိုလူငယ်မျိုးဆက်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။
က virtual ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးထက်ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရှိသူများအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားသူတွေကိုအမျိုးမျိုးအသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုပြည့်ဝ၏။ ဥပမာ, ချိန်းတွေ့ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအခြို့သောအကွာအဝေးအတွင်းလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုတွေ့ရှိရန်အသုံးပြုသူဖွနှငျ့သငျနေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ရှာနေတဲ့မီးရထားပေါ်ခရီးသွားလာနေသောလျှင်အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်စွဲလမ်း (စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်း၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဒေါင်းလုပ်များသို့မဟုတ်လူကြီးများအတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အဘို့ချက်တင်ခန်းကို အသုံးပြု. လည်းပါဝင်သည်Cooper, Delmonico, Griffin-Shelley, & Mathy, 2004; Weinstein, Zolek, et al ။ , 2015; လူငယ်တို့, 2008) ။ အင်တာနက်ကိုအမှန်တကယ်ဘဝ (အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လုံခြုံနေရာဖြစ်ပါသည်Griffiths က, 2012) ။ လိင်-စွဲတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ရမ္မက်ကိုထိန်းချုပ်အတွက်အခက်အခဲများရှိသည်နှင့်သူတို့မကြာခဏမူးယစ်ဆေး, အရက်နှင့်နီကိုတင်းစွဲလမ်း (များ၏သမိုင်းများKarila et al ။ , 2014), သူတို့ရဲ့စုံတွဲနှင့်မိသားစုဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးဖြစ်သော (Schneider, 2003; Manning, 2006) ။ Carnes (2001လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အင်တာနက်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်သူများအတွက်ကိုကင်းကိုအက်ကြောင်းနှင့်တူသည်ဟုစောဒကတက်သည်။ Cooper et al ။ (2004အွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်းမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ရှေ့ပြေးအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောလိင်စွဲလမ်းသူများသည်တစ်ပတ်လျှင် ၁၁ နာရီအွန်လိုင်း သုံး၍ ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များတွင်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့နိုင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အချို့သူများကနေ့စဉ်ဘ ၀ ပြproblemsနာများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အွန်လိုင်းသုံးရသောအချိန်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုမတွေ့ရပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုယူပြီး (Bancroft et al ။ , 2003; Bancroft & Vukadinovic, 2004; Kalichman & Rompa, 1995, 2001) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားရှာကြံ (Kalichman & Rompa, 1995; Zuckerman, 1979) မကြာခဏ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Hoyle, Fefjar, & Miller က, 2000) ။ ဤရွေ့ကား Construction မျိုးစုံမိတ်ဖက်, အကာအကွယ်မဲ့လိင်, unplanned ကိုယ်ဝန်နှင့် psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ရှိခြင်း, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုအသုံးချခဲ့ကြHayaki, Anderson, & Stein, 2006; Justus, ဖင်လန်, & Steinmetz, 2000; Lejuez, Simmons, Aklin, သမီး, & Dvir, 2004; Teese & Bradley, 2008; Seal & Agostinelli, 1994) ။ လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအာရုံရှာနှင့်ထိုသုံးပြီးချိန်းတွေ့ပလီကေးရှင်းလိင်စွဲလမ်း၏အစီအမံအကြားမျှအပြန်အလှန်ဖော်ပြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများအတွက်အဓိက drive ကိုလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချထက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အာရုံရှာတိုးမြှင့်ဖို့ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရငျးနှီးပြဿနာများရှိသည်ထက်စိတ်လှုပ်ရှားရသူတွေကိုအားဖြင့်နွေးထွေးမှုရရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစ-ချိန်းတွေ့ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူပုံမှန်လိင်စှဲလမျးသူထက်ပိုပြီးလူမှုရေးအရဘယျလိုမှနှင့်အန္တရာယ်-takers လျော့နည်းထကြွလွယ်သောဖြစ်ကြသည်ကိုပုံရသည်။
ဒီလေ့လာမှုကမြင့်မားသောအမည်ဝှက်ထားပြီးပေမယ့်မေးခွန်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရထိန်းချုပ်ရှိကြောင်းအင်တာနက်-based စစ်တမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကြောင့်လူမှုရေးဖိအားကြောက်ရန်, သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့အဖြေတွေကိုအကြောင်းကိုလုံးဝရိုးသားသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းကြဘူးကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ဒုတိယအချက်, ကျနော်တို့ချိန်းတွေ့လျှောက်လွှာများမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်ကြပြီမဟုတ်နှင့်တစ်သဖွငျ့ variable ကိုဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီလေ့လာမှုက, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲပေါ်မှာငါတို့လက်ရှိအသိပညာမှစမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. အင်တာနက်ပေါ်ရှိ applications များချိန်းတွေ့သောခေတ်သစ်အသက်ခေတ်မီယုတ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါဟာလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ထက်အာရုံရှာဒီလူဦးရေအကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းထိုကဲ့သို့သောလိင်တူဆက်ဆံသူ, လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ချစ်သူများ, လူဦးရေ, ရှိခြင်းသူတွေထဲမှာချိန်းတွေ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်အမည်မသိအဖြစ်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်ရှင်းလင်းသင့်ကြောင်းကိစ္စများနေဆဲရှိပါတယ်။ လေ့လာမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာအခြားကိစ္စရပ်များထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, (နယ်စပ်ဒေသ narcissistic antisocial, နှင့်အခြားသူများ) နဲ့ comorbidity ဖြစ်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲမတူဘဲ, က abstinence နေဖြင့်ကုသမှုတစ်ခုမော်ဒယ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှောင်ရှားရန်ခက်ခဲဖြစ်ပုံရသည်; ဤအရပ်မှ, လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိင် drive ကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၏ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အရေးပါမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများအပါအဝင်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီစက္ကူ၏အရေးအသားအထိဦးဆောင်သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ငန်းစဉ်သိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါစာရေးဆရာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းစီမံကိန်း, ထိုစမ်းသပ်ချက်၏စွမ်းဆောင်ရည်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ရလဒ်များအနက်နှင့်ထုတ်ဝေများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။
သုတေသနပြုသူများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်လှုပ်ရှားမှုများ (စာရေးသူသည်စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ဘဏ္interestsာရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်သုတေသနအတွက်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း) ကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားမှုများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများမရှိပါ။ သူတို့ကဒီလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်။ အကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခမအစီရင်ခံပါ။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုမတ်လ3အတွက်ဂျီနီဗာဆွစ်ဇာလန်အတွက် 2016rd ICBA အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
American Psychiatric Association ။ (2013) ။ diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-5®) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association ။ Crossref, Google Scholar
Arnett, ဂျေ (1994) ။ Sensation ရှာမြား: A သစ်ကိုစိတ်ကူးအသစ်တစ်ခုစကေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 16 (2), 289-296 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/0191-8869(94)90165-1 Google Scholar
Bancroft, ဂျေ (2008) ။ "ထိန်းချုပ်ထဲက" ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသီအိုရီအယူအဆချဉ်းကပ်။ မြောက်အမေရိက, 31 (4) ၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း, 593-601 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.06.009 Medline, Google Scholar
Bancroft, ဂျေ, Janssen, အီး, ခိုင်ခံ့, D. , Carnes, အယ်လ်, Vukadinovic, Z. , & Long က, ဂျေအက်စ် (2003) ။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်စားမှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်း၊ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းတို့၏ဆက်စပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 32 (6), 555-572 ။ Doi:https://doi.org/10.1023/A:1026041628364 Medline, Google Scholar
Bancroft, ဂျေ, & Vukadinovic, Z. (2004) ။ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သီအိုရီမော်ဒယ်တစ်ခုဆီသို့။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 41 (3), 225-234 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224490409552230 Medline, Google Scholar
Carnes, P. (1991) ။ လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်။ Tennessee ပြည်နယ်သူနာပြု, 54 (3), 29 ။ Medline, Google Scholar
Carnes, P. (1992) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကမခေါ်ပါနဲ့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကနေ Recovery ကို။ ကျပန်းအိမ် LLC: နယူးယောက်, NY ။ Google Scholar
Carnes, P. (2001) ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက: နားလည်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ Minneapolis, MN: CompCare ။ Google Scholar
ချို, အက်စ်အမ်, Sung, M.-J. , Shin, K. အမ်, Lim, K. Y. , & Shin, Y. M. (2013) ။ ကလေးဘဝရှိစိတ်ပညာသည်အထီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အင်တာနက်စွဲခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပါသလား။ ကလေးစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ၄၄ (၄)၊ ၅၄၉-၅၅၅ ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10578-012-0348-4 Crossref, Medline, Google Scholar
Cooper က, အေအယ်လ်, Delmonico, L. L. , Griffin-Shelley, အီး, & Mathy, R. အမ် (2004) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု - ပြpotentiallyနာဖြစ်နိုင်သည့်အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲ & compulsivity, 11 (3), 129-143 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160490882642 Google Scholar
Fong က, တီဒဗလျူ (2006) ။ compulsive လိင်အပြုအမူများကိုနားလည်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,3(11), 51-58 ။ Medline, Google Scholar
Garcia က, အက်ဖ် D. , & Thibaut, အက်ဖ် (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု။ အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုဂျာနယ်, 36 (5), 254-260 ။ Doi:https://doi.org/10.3109/00952990.2010.503823 Crossref, Medline, Google Scholar
Griffiths က, အမ် D. (2012) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 20 (2), 111-124 ။ Doi:https://doi.org/10.3109/16066359.2011.588351 Crossref, Google Scholar
Hayaki, ဂျေ, အန်ဒါဆင်, ခ, & Stein, အမ် (2006) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ: Impulsivity မှဆက်ဆံရေး။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ, 20 (3), 328-332 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0893-164X.20.3.328 Medline, Google Scholar
Heimberg, R. G. အ, Horner, K. ဂျေ, Juster, အိပ်ချ် R. , Safren, အက်စ်အေ, ဘရောင်း, အီးဂျေ, Schneier, အက်ဖ် R. , & Liebowitz, အမ် R. (1999) ။ အဆိုပါ Liebowitz လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုစကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ စိတ်ပညာဆေးပညာ, 29 (1), 199-212 ။ Medline, Google Scholar
Hook, ဂျေ N. , ချိတ်, ဂျေပီ, Davis က, E. အီး, Worthington, အီးအယ်လ်ဂျူနီယာ & Penberthy, ဂျေကေ (2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 36 (3), 227-260 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00926231003719673 Medline, Google Scholar
Hoyle, R. အိပ်ချ်, Fejfar, အမ်စီ, & Miller က, ဂျေ D. (2000) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုယူခြင်း: တစ်အရေအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဂျာနယ်, 68 (6), 1203-1231 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/1467-6494.00132 Medline, Google Scholar
Justus, အေ N. , ဖင်လန်, P. R. , & Steinmetz, ဂျေအီး (2000) ။ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုအပေါ်ပိုးသတ်ဆေး၏စရိုက်များသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, 24 (7), 1028-1035 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2000.tb04646.x Medline, Google Scholar
Kaess, အမ်, Durkee, တီ, Brunner, R. , Carli, V. , Parzer, P. , Wasserman, C တို့, Sarchiapone, အမ်, Hoven, C တို့, Apter, အေ, Balazs, ဂျေ, Balint, အမ်, Bobes, ဂျေ, Cohen ကို, R. , Cosman, D. , Cotter, P. , Fischer, G. အ, Floderus, ခ, Iosue, အမ်, Haring, C တို့, Kahn, JP, Musa , GJ, Nemes, ခ, Postuvan, V. , Resch, အက်ဖ်, Saiz, PA ဆိုပြီး, Sisask, အမ်, Snir, အေ, Varnik, အေ, Žiberna, ဂျေ, & Wasserman, D. (2014) ။ ဥရောပဆယ်ကျော်သက်များအကြားရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: စိတ်ပညာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းအပြုအမူများ။ ဥရောပကလေး & ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါကုသမှု, 23 (11), 1093-1102 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s00787-014-0562-7 Medline, Google Scholar
Kalichman, အက်စ်စီ, & Rompa, D. (1995) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုများအတိုင်းအတာ - တရားဝင်မှုနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီအန္တရာယ်အပြုအမူကိုခန့်မှန်းခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 65 (3), 586-601 ။ Doi:https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6503_16 Crossref, Medline, Google Scholar
Kalichman, အက်စ်စီ, & Rompa, D. (2001) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအတိုင်းအတာ - အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသူများနှင့်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အသုံးပြုမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 76 (3), 379-395 ။ Doi:https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7603_02 Medline, Google Scholar
Karila, အယ်လ်, Wéry, အေ, Weinstein, အေ, Cottencin, O. , Petit, အေ, Reynaud, အမ်, & Billieux, ဂျေ (2014) ။ လိင်အစွဲသို့မဟုတ် hypersexual disorder - တူညီတဲ့ပြproblemနာအတွက်အသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုးလား။ စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း, 20 (25), 4012-4020 ။ Doi:https://doi.org/10.2174/13816128113199990619 Crossref, Medline, Google Scholar
ကို, C.-H. , လျူ, T.-L. , ဝမ်, P.-W. , Chen က C.-S. , ယန်း, C.-F. , & ယန်း, J.-Y. (2014) ။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတွင်စိတ်ကျရောဂါ၊ ရန်လိုမုန်းတီးမှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 55 (6), 1377-1384 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.05.003 Crossref, Medline, Google Scholar
Långström, N. , & Hanson, R. K. (2006) ။ အထွေထွေလူ ဦး ရေတွင်လိင်အပြုအမူမြင့်မားမှု - ဆက်စပ်မှုနှင့်ခန့်မှန်းသူများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 35 (1), 37-52 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-006-8993-y Crossref, Medline, Google Scholar
Lejuez, C. ဒဗလျူ, Simmons, ခအယ်လ်, Aklin, ဒဗလျူအမ်, သမီး, အက်စ်ခ, & Dvir, အက်စ် (2004) ။ လူနေအိမ်ပစ္စည်းများကိုကုသရာတွင်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စွန့်စားနိုင်သောစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 29 (8), 1643-1647 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.02.035 Medline, Google Scholar
Liebowitz, အမ် R. (1987) ။ လူမှုရေး phobia ။ Pharmacopsychiatry ၏ခေတ်သစ်ပြProbleနာများ, 22, 141-173 ။ Doi:https://doi.org/10.1159/000414022 Medline, Google Scholar
Lorains, အက်ဖ်ကေ, Cowlishaw, အက်စ်, & သောမတ်စ်, အက်စ်အေ (2011) ။ ပြproblemနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများတွင် comorbid မမှန်များ၏ပျံ့နှံ့: လူ ဦး ရေစစ်တမ်းများ၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲ, 106 (3), 490-498 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.03300.x Crossref, Medline, Google Scholar
Manning, ဂျေစီ (2006) ။ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများ၏အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှု - သုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်စွဲမှုနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၃ (၂-၃)၊ ၁၃၁-၁၆၅ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160600870711 Google Scholar
Mick, တီအမ်, & Hollander, အီး (2006) ။ ထကြွလွယ်သော - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS Spectrums, 11 (12), 944-955 ။ Doi:https://doi.org/10.1017/S1092852900015133 Medline, Google Scholar
Mueller, အေ, မစ်ချယ်, ဂျေအီး, Black က, W. ဒဗလျူ, Crosby, R. ,, Berg က, K. , & de Zwaan, အမ် (2010) ။ ၀ ယ်ယူခြင်းမသန်မစွမ်းဖြစ်နေသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏နမူနာတွင်ငုပ်လျှိုးနေသည့်ပရိုဖိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 178 (2), 348-353 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.04.021 Crossref, Medline, Google Scholar
ပယ်ရီ, အမ်, Accordino, အမ်ပီ, & Hewes, R. L. (2007) ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကင်းသောခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲ & compulsivity, 14 (4), 321-335 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160701719304 Google Scholar
Schneider, ဂျေ (2003) ။ မိသားစုအပေါ် compulsive ကျဘာအပြုအမူတွေ၏သက်ရောက်မှု။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး, 18 (3), 329-354 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/146819903100153946 Google Scholar
တံဆိပ်ခတ်, D. ဒဗလျူ, & Agostinelli, G. အ (1994) ။ မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ - ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု အကူအညီများစောင့်ရှောက်မှု,6(4), 393-397 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/09540129408258653 Medline, Google Scholar
Semaille, P. (2009) ။ စွဲလမ်း၏အသစ်အမျိုးအစားများ။ Revue Medicale က de Bruxelles, 30 (4), 335-357 ။ Medline, Google Scholar
သိုးထိန်း, R.-M. , & Edelmann, R. ဂျေ (2005) ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွာခြားချက်များ, 39 (5), 949-958 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.04.001 Google Scholar
Smith ကအေ, & Duggan, အမ် (2013) ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ။ ။ အင်တာနက်နှင့်နည်းပညာသုတေသနဌာန Pew ။ Google Scholar
Teese, R. , & Bradley, G. အ (2008) ။ ထွန်းသစ်စလူကြီးများအတွက်မဆင်မခြင်ခန့်မှန်းခြင်း - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစံပြနမူနာတစ်ခု။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 148 (1), 105-128 ။ Doi:https://doi.org/10.3200/SOCP.148.1.105-128 Medline, Google Scholar
Weinstein, အေ, Dorani,,, Elhadfi, R. , Bukovza, Y. , Yarmulnik, အေ, & Dannon, P. (2015) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု, 27 (1), 4-9 ၏ရာဇဝင်။ Doi:https://doi.org/10.1093/med/9780199380183.003.0001 Medline, Google Scholar
Weinstein, အေ, Maayan, G. အ, & Weinstein, Y. (2015) ။ compulsive လေ့ကျင့်ခန်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုအပေါ်တစ် ဦး ကလေ့လာမှု။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,4(4), 315-318 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.034 လင့်ခ်, Google Scholar
Weinstein, အေ, Mezig, အိပ်ချ်, Mizrachi, အက်စ်, & Lejoyeux, အမ် (2015) ။ အင်တာနက်ဝယ်သူများထံမှစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသော ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတိုင်းအတာများနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 57, 46-50 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.11.003 Medline, Google Scholar
Weinstein, အေအမ်, Zolek, R. , Babkin, အေ, Cohen ကို, K. , & Lejoyeux, အမ် (2015) ။ cybersex အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုအသုံးပြုသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရာတွင်အခက်အခဲများရှိသည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်နယ်စပ်ဒေသများ၊ ၆ (၅)၊ ၁-၈ ။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2015.00054 Medline, Google Scholar
Weiss, R. , & Samenow, C. P. (2010) ။ စမတ်ဖုန်းများ၊ လူမှုကွန်ယက်များ၊ ဆက်စ်တင်များနှင့်ပြsexualနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ - သုတေသနအတွက်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု။ လိင်စွဲ & compulsivity, 17 (4), 241-246 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2010.532079 Google Scholar
Zuckerman, အမ် (1979) ။ Sensation ရှာကြံ: arousal ၏အကောင်းဆုံးအဆင့်ကို ကျော်လွန်. ။ Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates မှ။ Google Scholar
Zuckerman, အမ်, Kolin, အီးအေ, စျေး, အယ်လ်, & Zoob, ဗြဲ (1964) ။ တစ် ဦး အာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေခြင်းစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ အတိုင်ပင်ခံစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 28 (6), 477-482 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/h0040995 Crossref, Medline, Google Scholar